‘एनआरएनए’ अस्ट्रेलियाको नयाँ कार्यसमितिका लागि भट्टको उम्मेदवारी ! – Sodhpatra
‘एनआरएनए’ अस्ट्रेलियाको नयाँ कार्यसमितिका लागि भट्टको उम्मेदवारी !
नयाँ कार्यसमितिका लागि भट्टको उम्मेदवारी
प्रकाशित : ३१ असार २०७८, बिहीबार १८:१३ July 15, 2021
धनगढीः एनआरएनए अस्ट्रेलिया, आगामी कार्यसमितिका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि बसन्तराज भट्टले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको घोषणा गरेका छन् । भट्टले एसीसी एनआरएन एसी टी सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका हुन । निर्वाचन जुलाई ३१ तारिकमा हुदैछ ।
उम्मेदवारी घोषणा गदै भट्टले आउँदो कार्यकाल २०२१ – २०२३ का लागि हाम्रा एजेण्डाहरु र हामीले गर्ने प्रतिबद्धतासहित आउने बताए । एनआरएनए अभियानमा रहेर समुदायको सेवा गर्ने चाहना पुरा गर्नका लागि एनआरएनहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
“साझा एन एनआरएनए” वास्तवमै हामी सबैको साझा अभियान हो र “सबल एनआरएनए” को प्रमुख आधार भनेकै यो अभियानलाई थप संस्थागत गर्दै समुदायका सबैलाई अपनत्व प्रदान गर्ने नै हो । त्यसका लागि सबै मिलेर प्रतिबद्ध भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।